Suzhou OCAN Polymer Material Co., Ltd itholakala esifundeni ukuthuthukiswa Suzhou nekomkhulu obhalisiwe ayizigidi ezingu-35. OCAN is ezikhethekile ekukhiqizeni PVC / PET (kuhlanganise amashidi, imiqulu, ifilimu) engaphezu kwengu-20. Okwamanje, OCAN has 14 imigqa eziphambili ukukhiqizwa, izuze amandla nyangazonke amathani 3500. Imikhiqizo yethu kabanzi isetshenziswa ezifana ukuphrinta, emabhokisini sigubhu ukugoqa, izinto zokubhala, lisebenze kagesi kanye nezimboni ukwelashwa amanzi.
OCAN njalo iphatha imimoya "Ukwethembeka", "pragmatic", "Ukuqamba" futhi "Win-Win" selokhu yasungulwa. Thina nje kuphela ukwanelisa imikhiqizo high kodwa futhi sokuyokhonza amakhasimende wethu wonke heartedly. Siyakwamukela uxhumane futhi sibambisane!
Suzhou Ocan Polymer Material Co., Ltd kuyinto PVC professional nomkhiqizi PET. iminyaka R & D 20, ukukhiqizwa futhi yokuthengisa experience.The inkampani ohileleke extrusion & calerdering umugqa.
OCAN uthola ezihlukahlukene isitifiketi patent, imikhiqizo zobuchwepheshe, China yegama lomkhiqizo amabhizinisi, ISO9001: 2008 isitifiketi sesistimu nokuvivinywa SGS REACH, RoHS nezimfuneko ukuhlola kwebhoduluko. Lonyaka okukhipha value 30000tons.
PVC obala uchungechunge
PVC Frosted ishidi uchungechunge
PVC uchungechunge ezimhlophe
PVC black uchungechunge
PVC umbala uchungechunge
PVC ezithambile ifilimu uchungechunge
PVC ucwecwe uchungechunge
PVC ukugoqa isigubhu
ebusweni eseqedile: ecwebezelayo noma matt / embossed
700 * 1000mm, 1000 * 1400mm, 915 * 1220mm, 915 * 1830mm, 1000 * 2000mm, 1220 * 2440mm noma ngokuvumelana inketho amakhasimende '.
Siyakwamukela uxhumane nathi! Sibheke phambili kokusungula eside, ubudlelwano okuthembekile, ezinhle futhi unokwethenjelwa nawe ukuthuthukiswa ezivamile.
Quality Isimiso: Abantu ngamakhasimende, iqhaza, Excellent, Innovative futhi elamukelekayo
Quality Igoli: Umkhiqizo Ukukala abafanelekayo> = 99%
Ukwanelisa Amakhasimende> = 78%
Ngo-Isikhathi sokuletha Ukukala> = 98%
Buyela Ukukala <= 0.8%
© Copyright - 2010-2017: Suzhou OCAN Polymer Material Co., Ltd Wonke amalungelo agodliwe.